वीपी प्रतिष्ठानबाट १३ दिने शिशुको अपहरणप गरि भारत बेच्न लान खोज्ने नन्द-भाउजू पक्राउ, बच्चाको पनि उद्दार - Hulaki Samachar
मुख्य पृष्ठ /रोचक/वीपी प्रतिष्ठानबाट १३ दिने शिशुको अपहरणप गरि भारत बेच्न लान खोज्ने नन्द-भाउजू पक्राउ, बच्चाको पनि उद्दार
धरान / धरानस्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट बुधबार राती १३ दिनको शिशु चोरी भएको छ । शिशु चोरीको आरोपमा प्रहरीले दुई जना महिलालाई नियन्त्रणमा लिएको छ । पक्राउ पर्नेमा धरान १५ की लिला बिक र उनकी भाउजु मिना लिम्बु बिक रहेका छन् । शिशुलाई धरान–१५ बगरकोटमा फेला पारिएको थियो ।
लिला विकका श्रीमान् भारतको दिल्ली बस्दैं आएको बताइएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालयका डिएसपी ढुण्डीराज न्यौपानेका अनुसार आफु पाल्नका लागि लगेको भनेर बयान दिएको बताए । ‘विक्रि गर्नका लागि लगेको पनि हुन सक्छ हामी अनुसन्धान गरिरहेका छौं ।’–डिएसपी न्यौपानेले भने ।
उनीहरु विरुद्ध बच्चा चोरी तथा अपहरणको जाहेरी आएको उनले बताए । १०/ १२ दिनदेखि बच्चा जन्मिए पछि राख्ने वार्डतिर नै बसेर सहयोग गरेजस्तो गरेर विश्वास जितेर हिजो राती आफन्त निदाएको बेला बच्चा चोरी गरेको पाइएको डिएसपी न्यौपानेले बताए चोरी भएको सुनसरीको भोक्राहा नर्सिङ गाउँपालिका १ का जितनारायण मेहता र बबिता मेहताको छोरा हो ।
साताभर मेघ गर्जनसहित पानी पर्छ जीउ र बीउ जोगाउनुहोस् – मौसमविद
यो बेला खाद्यान्नका बीउ र मानिसको जीउ जोगाउन सतर्क रहनुपर्ने मौसमविद्हरू बताउँछन् । महाशाखाले बिहीबार विशेष भविष्यवाणी गर्दै ती २५ जिल्लामा कहिले हल्का, कहिले मध्यम तथा कहिले भारी वर्षाको अवस्था रहने जनाएको छ । महाशाखाका वरिष्ठ मौसमविद् शान्ति कँडेलले शुक्रबारसम्म देशका अधिकांश क्षेत्रमा भारी वर्षा हुने जानकारी दिए ।
केटाहरुलाई सामाजीक संजालबाट चिनेकै भरमा विश्वास गरी आफ्नो इज्जत लिलाम नगर्नुस्
एउटै ढुंगाबाट बनेको विश्वकै सबैभन्दा ठूलो शिव लिङ्ग !
सबैको गन्तब्य यहि हो। लोभलालच नगर्नु होला ! जीवन बदल्न यो लेख पढ्नुहोला
छिमेकीको १३ बर्षीय छोरालाई बाँधेर पटक/पटक बलात्कार गर्ने महिला पक्राउ परेकी छिन ।